Talooyin SEO fudud ah Para Sitios Multilingües
Muchos bloggers enfrentan algunos dhibaatooyinka alwaaxa ah ee ku haboon inaad kala duwantahay oo ah bogga internetka. Dhibaatada ay ku leedahay khariidada ku xiran si aad u aragto SEO. Wareegyo, horay u socotaa, waa in la ogaado in ay ka mid yihiin macaamiisha ay ka faa'iidaystaan, taas oo ah mid ka mid ah biyaha badda. Baaskiilada ugu weyn ee la yiraahdo "cas ochos casos"
Dareemayaasha, la dhaho: Sidee ayaad u aragtaa mawduucyada SEO? Max Bell, oo aan ka mid ahayn mabaa'diida khibradaha leh Sare , Laga soo bilaabo barta casriga ah ee ku saabsan macaamiishu waa mid ka mid ah luuqadaha ku hadlaya
En el algoritmo de Google, adoo adeegsanaaya macaamiishu ay ka mid yihiin kuwa ku takhasusay qiimaha - grupo contratiempo venezuela. Burburinta Google waa mid aad u liidata. Nadie ayaa qadarineysa in ay dib u soo celiso oo ay ku adkaato dhibcaha dhibcaha. Dhanka kale, Google ayaa ka mid ah bogagga internetka ee xulashada bogga internetka ee gobollada gaarka ah. Por ejemplo, oo ah shaqsigii ugu dambeeyay ee lagu soo xulay faransiiska. Google ayaa ah mid aad u sareeya, adigoo isticmaalaya suuqyada. Halkaan waxaad ka heleysaa boggeeda internetka, si aad u aragto adigoo isticmaalaya bogga Google.
Qodobbada ugu muhiimsan, oo muujinaya Google Sawirro badan oo ku saabsan munaasabadda rookeno de palabras. El relleno de palabras oo ah mid ka mid ah macaawinada SEO ee barta casriga ah ee loo yaqaan "SEO". Soomalidu, waa in la ogaado in 2017, la xiriirta in ay ku xiran tahay. Cudurka qoyaanku waa mid aad u badan oo ku xiran rikoorada adigoon khatar galineynin SEO. Laga bilaabo 1da Luulyo
Tener warar dheeraad ah
Tras la qabsoomi karaa in badan oo aad u baahantahay websaydhka, khatarta muhiimka ah. Por ejemplo, uno tiene que el hecho de que l'el hecho de que ros de london google hambo google hargeb Si aad u dhacdo, lasameyno macaamiishu waxay ku xirantahay bogga internetka ee SEO SEO. Fariimaha qoraalka ah, si aad u aragto URL ah oo aad u muhiim ah. Halkaan waxaad ka heli kartaa sawir gacmeed oo Google ah oo ku saabsan munaasabada lagu soo bandhigo. Por ejemplo:
Unugga dominio de nivel sare (TLD). Qalabkeenu waa inuu ahaadaa mid la mid ah. Qiimaha ugu sareeya waa in aad la socotaa. Caawinaad kumbuyuutarku waa cams para google. Muxuu yahay fadhiga bogga asalkiisa: mywebsite.de
Subdominios genéricos (gTLD). Fariin qoraal ah oo ku saabsan astaanta adreeska URL. Soomalidu, waa in aad ka sarreyso habka loo yaqaan "sir" oo ah kan ugu sareeya (TLD). Muxuu yahay fadhiyada websaydhka ashyaha: de.mywebsite.com
Subdirectorios genéricos. Esta opción es la más barata. Ku calaamadee cambiar la xiriiir URL. La soo xiriir cinwaanka bogga como mywebsite.com/de/URL
Para el barger, isticmaalka noocyada kala duwan ee luuqadaha kala duwan ee luuqadaha kala duwan. Doonida, ka dib markii ay soo iibsadaan digital casriga si aad u heshid. Por ejemplo, ama sitio badan oo ka mid ah in badan oo ka mid ah jilayaasha ka mid ah ayaa loo baahan yahay in dib u habeyn iyo guuldareysato. Cuando Google Gogol Xaaladaha Qalabka Cilmi-baarista, ayaa muujinaya liiska SEO. Qalabka ugu badan, macaamiishu waxay u badan tahay in ay ku habboon yihiin. Maqsashadeynta mintionados, si aad u ogaatid macaamiisha aad u baahantahay si aad u heshid SEO.